जनप्रतिनिधि यार्सा टिप्न गएपछि…! « Drishti News
जनप्रतिनिधि यार्सा टिप्न गएपछि…!
Published On : 29 June, 2019
डोल्पा, १४ असार । डोल्पाका जगदुल्ला, मुड्केचुला र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका बाहेक अन्य पाँच वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । आठ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको छ  ।
अधिकांश समय काठमाडौँमा बिताएर चैतमा मात्र डोल्पा पुगेका जनप्रतिनिधि अहिले यार्सागुम्बाको सिजन शुरु भएपछि जेठ महीनादेखि पाटनमै रहेका पाइएका छन् । जनप्रतिनिधि पाटनमा भएपछि स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधि यार्सा टिप्न पाटन र गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल सदरमुकाम बस्दा समस्या भएको नागरिक अगुवा शेरबहादुर बुढाले बताए ।
पटक÷पटक समयमै बजेट ल्याउन अनुरोध गरिएको र यार्सागुम्बा संकलका लागि व्यवस्थापन राम्रो बनाइदिन आग्रह गरे पनि त्यो सुनुवाइ नभएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले बताए । पाँच स्थानीय तहले यार्सा संकलनलगायत विभिन्न कारण देखाइ बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएका नेपाल पत्रकार महासङघ डोल्पाका पूर्व अध्यक्ष विष्णुलाल बुढाले बताए ।
आन्तरिक तयारी भए पनि बजेट सार्वजनिक हुन केही समय लाग्ने छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताउनुभयो । छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध, काइके र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका तथा ठूलिभेरी नगरपालिकामा बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । उपल्लो डोल्पामा बैंक नहुँदा अहिले लेखापाल र प्रशासकीय अधिकृत दुनैमा बसेर उपल्लो डोल्पाको विकास निर्माण भएको भन्दै भुक्तानी दिइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि यार्सागुम्बा पाटनबाट फर्कने क्रम जारी रहेको छ । अधिकांश समय सदरमुकाम धाउनुपर्ने र माथिल्लो डोल्पामा जनता नै नभेटिने कारणले गर्दा समस्या भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यही असार २५ गतेसम्म बजेट सार्वजानिक गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
अहिले यार्सा सिजन केही समयपछि चीनमा व्यापार, चिसोमा तल्लो भेगमा झर्ने समस्याले गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनचन्द्र धरालाले बताए । तीन दिनभित्र कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष लगायतको टोली दुनै आइपुग्ने उनले बताए ।
टालिएको मलद्वारदेखि फुटेको आन्द्रासम्म नेपालमै उपचार
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं, २ कातिक । जन्मँदै दुवै अण्डकोष पेटभित्र भएका ११ वर्षीय प्रसंग गोदार
एनआरएनएका १२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा के छ ?
काठमाडौं, २ कातिक । सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई साकार पार्ने तथा
राष्ट्रपतिबाट आङ सन संग्रहालय अवलोकन
म्यान्मार, २ कातिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यंगोनास्थित बोग्योक आङ सन संग्रहालयको आज शनिबार अवलोकन
काठमाडौं, २ कात्तिक । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) ले स्नातकोत्तर तहको एमडी÷एमएस÷एमडिमएसको प्रवेश परीक्षा अर्काे
चिनियाँ अभिनेत्री सी सदभावना दूत नियुक्त
काठमाडौं, २ कातिक । चिनियाँ अभिनेत्री सी छिङ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’को सद्भावना दूत नियुक्त भएकी